Ogaden News Agency (ONA) – Xuskii maalinta xasuuqa Somalida Ogadenia oo xalay kusoo dhamaatay caasimada Sweden Stockholm
Xuskii maalinta xasuuqa Somalida Ogadenia oo xalay kusoo dhamaatay caasimada Sweden Stockholm
Posted by ONA Admin	/ February 26, 2017
Waxaa caasimada wadanka Sweden stockholm lagu qabtay munaasabadii lagu xusayay maalinta xasuuqa shacabka Somalida ogadenia ee bishan oo kale laga xuso dunida dacaladeeda.
Sidii caadada inoo aheed munaasabada waxaa lagu furay yadaha quraanka kariimka ah wacdi diini ah iyo heesta calanka ogadenia.
Waxaa sidoo kale warbixin kooban ka bixiyay sababta bishan loo xuso maalinta xasuuqa Somalida Ogadenia Gudoomiyah jaaliyada Sweden mudane Abdirahman Bisha febraayo waxay kulmisaa maalmo xusuus iyo qadarin ka mudan shacbiga Soomalida Ogaadenya. Bishan gudaheeda waxaa dhacay dhacdooyin waawayn oo taariikhda dalka Ogaadenya baal muhiim ah ka galay. Maalmahaas qaar waxay leeyihiin murugo, qaara farxad, labadaba way isku darsadeen.
Inta kadib waxaa makarafoonka lagu soo dhaweyay mudane Abdi xakiim oo goobta kusoo bandhigay qoraal tariikhda bishan iyo dhacdooyinka murugada badan ee dhacay sidoo kalan soo bandhigay sawiro muujinaya xasuuqa.
Waxaa makarafoonka lagu soo dhaweeyay Xildhibaan Riyaale xaamud ahmed oo soo bandhigay dhacdooyin isaga naftiisa qabsaday iyo kuwo shacabka dhamaan loo gaystay kana warbixiyay dhibaatooyinka lagu hayo shacabka Somalida Ogadenia.
Waxaa sido kale hadalka la wareegay oo arimo muruga badan goobka kusoo bandhigay Xildhibaan Abdinaasir gadhweyn oo badalay jawiga goobta munaasabada ka socotay.
Gudoomiyaha Ururka haweenka marwo Ismahaan ayaa sidoo kale hadal qiimo leh munaasabada ka jeedisay.
Waxaa munaasabada ka soo wada qayb galay shacabka Somalida ogadenia xubno ka socday jaaliyadda Somaliweyn iyo wariyaal Swedish ah oo goobta lagu marti qaaday kana dhawaajiyay wax yaabaha goobtan lagu soo bandhigay inay yihiin wax dunida aan ka dhicin hada kadibna u guur gali doonan qaybta kalinta kaga aadan qadan doonan gabagabdii munaasabada waxay kusoo dhamaatay jawi wanaagsan iyo shacabka oo balan qaaday inay garab istaagi doonan halgankooda.